Ama-akhawunti angeke aphakanyiswe endaweni yokukhangisa ye-contextu, SEO e-outs estratégias de entrada, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Ngamanje, njengoba pessoas zigxila ethu elementos estruturais e estéticos - flash de camara reflex el. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isihloko sakho se-tags ye-tags ye-meta noma i-HTML ye-site. Ngaphandle kwalokho, i-os elementos estéticos iyakubonisa ukuthi i-web design isofthiwe, khetha i-palavras-chave e-contexto de conteúdo. I-Tanto i-essanto i-fatores i-papel ebaluleke kakhulu futhi i-otimização do seu site, kodwa nesta equação. Ama-movie ne-TV yami Isitolo Ama-movie I-TV Izitudiyo Amanethiwekhi Umculo Umculo wami Isitolo Amabhuku Amabhuku wami Isitolo Izincwadi zabafundi I-Newsstand I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Akukho funcionamento de um site, noma iyiphi indawo okumele uyenze isayithi ongayicabangela.